आठ वर्षमा जति प्रगति गर्यौं, एक वर्षमा त्यसको दोब्बर भयो
तत्कालीन ग्रिनलेज (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल)मा १२ वर्ष बढी र नबिल बैंकमा ५ वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकी अनुपमा खुन्जेली अहिले मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । उनी मेगा बैंकको सेकेन्ड म्यान भएर ८ वर्ष काम गरेपछि सीईओ बनेकी हुन् । खुन्जेली नेपालको बैंकिङ इतिहासकै वाणिज्य बैंकको पहिलो महिला सीईओ पनि हुन् । तर, उनले महिला भएको आधारमा होइन, आफ्नो क्षमता र कार्यदक्षताले सीइआको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । खुन्जेलीले महिला सीइओ भएर काम गर्दा आइपर्ने चुनौती र अप्ठ्यारा, बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको चुनौती, मेगा बैंकको वर्तमान अवस्था तथा आगामी रणनीति लगायतका विषयमा शिलापत्रका लागि शिव सत्यालसँग कुराकानी गरेकी छन्ः
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष भयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
मैले सहायक तहको कर्मचारीबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी हुँ । त्यो पदबाट प्रमोसन हुँदै म्यानेजर, त्यसपछि सिनियर म्यानेजमेन्ट तह हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनें । बैंकिङ क्षेत्रमा नै तीन दशक बितेको छ । यो समयले असफलतासँग कसरी जुध्ने र सफलतामा कसरी रमाउने भन्ने सिकाएको छ । म बैंकर भएकोले हामीले के कस्तो काम गर्यौं भन्ने कुरा अंकले देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो १० वर्षको अवधिमा मेगा बैंकले साढे १० अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्याएर धेरै पुँजी हुने दोस्रो बैंक बनेको छ । त्यसैले व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर हामीसँग प्रशस्त छ । अहिले तरलता अभावका कारण केही चुनौती थपिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा नै निक्षेप स्रोत केही कम देखिन्छ । पहिलो त्रयमासमा ३ सय ४० प्रतिशतको वृद्धि गरेका थियौं । दोस्रो त्रयमासमा अघिल्लो वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत वृद्धि गर्यौं । यो त्रयमासमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि देखिन्छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट यो सम्भव भएको हो ।
सीईओ भएर काम गर्दा कतिको रमाइलो भइरहेको छ ?
रमाइलो भइरहेको छ । ३० वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा लागेपछि माथिल्लो जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने रहर पनि हुँदो रहेछ । मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले विश्वास गरेर एकजना महिलालाई सीइओको जिम्मेवारी दिइएको पनि छ । म धेरै खुसी छु । आफूले जानेको काम कुराहरु गर्न पाइएको छ । सञ्चालक समितिले तय गरेको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएको छ ।
यो बैंकका प्रमोटर धेरै हुनुहुन्छ त्यसैले काम गर्न कुनै समस्या भएको छैन ?
अहिले हाम्रो बैंकमा प्रमोटर ३ हजार हुनुहुन्छ । २ लाखभन्दा बढी सेयरधनी हुनुहुन्छ ।
तपाईं महिला भएकोले सीइओेको जिम्मेवारी दिएको होला कि क्षमतामा विश्वास गरेर ?
अहिलेको जमानामा महिला भएकै कारण कसैलाई सीईओ बनाइदिऊँ भनेर कोही लाग्दैन । यो मेरो क्षमताले पाएको जिम्मेवारी हो । बैंकभित्र पनि महिला वा पुरुष भन्ने छुट्टयाएर रिवार्ड दिने गरिएको छैन । कार्यक्षमता, लगनशीलता र उत्पादकत्वको कारणले नै मान्छेले जिम्मेवारी पाउने हो । यसमा म पनि पर्छु ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ३८ प्रतिशत महिला जनशक्ति यहाँ कार्यरत छ । मेगा बैंकको कुरा गर्ने हो भने उच्च व्यवस्थापन तहमै ४३ प्रतिशत महिला छौं । समग्रतामा हेर्ने हो भने मेगा बैंकका कूल कर्मचारीमा ४३ प्रतिशत महिला छन् । ३८ प्रतिशत महिला कार्यरत रहेको बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा महिला सीइओ हुनुले अरूका लागि पनि मोटिभेसन फ्याक्टर हो भन्ने लाग्छ ।
एउटा घर परिवारकै कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाले परिवारका सबै सदस्यलाई मिलाएर राखेको हुन्छ, मेगा बैंकमा पनि धेरै प्रमोटर भएकोले त्यसको व्यवस्थापनमा पुरुषभन्दा महिला अलि राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताले तपाईंलाई जिम्मेवारी दिएको हो कि ?
यो विशेष क्षमता महिलामा हुन्छ । महिलाले जसरी एउटा घरलाई राम्रोसँग मिलाएर राखेको हुन्छ, एउटा अफिस पनि त्यसैगरी मिलाउन सक्ने क्षमता हुन्छ हुन्छ । हो, तपाईंले भने जस्तै हाम्रो बैंकको प्रमोटर धेरै हुनुहुन्छ । सबैलाई मिलाउनै पर्छ । फेरि पनि एउटा कुरा त भन्नै पर्ने भयो, कुनै संस्थाको जिम्मेवारी दिँदा महिला पुरुष भन्दा पनि उसको कार्यदक्षतालाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्रतामा हेर्दा निर्णय प्रक्रियामा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या धेरै हुन्छ, यसअघि राष्ट्रियस्तरको एउटा विकास बैंकमा महिला सीइओ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकाल त्यति सुखद रहेन, महिला सीईओ हुँदा पर्दापछाडि बसेर अरूले नै गतिविधि गर्ने सम्भावना कतिको हुँदो रहेछ ?
त्यसैले मेरो ४ वर्षे कार्यकालमा महिला सीइओ भए पनि केही फरक पर्दैन । कार्यदक्षता राम्रो भएको महिलाले बैंकको राम्रो व्यवस्थापन नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नै पर्ने चुनौती मलाई छ । हुन त चार वर्षे कार्यकालको एक वर्ष बितिसक्यो । समय बित्न गाह्रो रहेनछ । हाम्रो बैंकको पाँच वर्षे योजना बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गरेर राम्रो नतिजा निकाल्न कुनै गाह्रो छैन । अंकले पनि हाम्रो कामको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । मैले पहिला पनि भने नि कामको सन्दर्भमा असफलता वा चुनौती आउँछन् नै । त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो ३० वर्षे बैंकिङ अनुभवले चुनौतीको सामना र समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने कुरा मैले यसअघि झेलिसकेको पनि छु त्यसैले मेगा बैंकलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन कुनै गाह्रो छैन ।
३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएको अनुभवी र सक्षम बैंकरलाई मेगा बैंकले सीईओ बनाएको छ । तर, तपाईंलाई महिला भएकै कारण कुनै समस्या छ कि भन्ने प्रकारको प्रश्न म गरिरहेको छु । मेरा यी प्रश्नले तपाईंलाई दिक्क पारेको छैन ?
छैन । मलाई यस्ता प्रश्नको सामना गर्न कुनै अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन । र, अनौठो पनि लाग्दैन किनभने हामीले हाम्रो समाजको वास्तविक अवस्था हेर्नुपर्छ । तपाइैंले भनेझैं निर्णय प्रक्रियामा पुरुषकै बाहुल्य छ । बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता एकदमै कम छ । बोर्डबाट कुनै निर्णय गराउनुपर्यो भनेर फाइल बोकेर गयो भने एउटा महिलाको स्वरभन्दा त्यहाँ रहेका पुरुषको स्वर नै बलियो हुन्छ । तर, अहिले त राष्ट्र बैंकले सबै बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्पनीमा एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । हाम्रोमा पनि एकजना सञ्चालक महिला हुनुहुन्छ । त्यसैले सहज वातावरण बनिसकेको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा कति महिलालाई सहभागी गराउन सक्छौं भन्ने अर्काे प्रश्न छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ प्रतिशत कर्मचारी महिला छन् । आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । संख्या धेरै हुनेबित्तिकै नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या पनि बढ्छ नै । तर, म वाणिज्य बैंकको पहिलो सीईओ भएकोले म यस्ता प्रश्नहरुको सामना गरिरहेको छु । आधा जनसंख्या रहेको महिलालाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा त संवैधानिक व्यवस्था नै हो । महिलालाई उद्यमशीलता र शिक्षामा सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसपछि समग्र विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
महिलालाई सहज रुपमा ऋण दिएर उद्यमशील बनाउनुपर्छ भन्ने योजना लिएर नेपालभर गइरहेका छौं । काठमाडौंको मैतीदेवीको हाम्रो शाखाका सबै कर्मचारी महिला मात्रै छन् । स्थिर सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व देशभरकै गरी जम्मा १० प्रतिशत मात्रै छ । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने प्राथमिक तहमा ९९ प्रतिशत छोरीहरुको सहभागिता छ । ९ कक्षाभन्दा माथि हेर्ने हो भने यो संख्या घटेर ४८ प्रतिशतमा पुग्छ त्यसैले यी सबै क्षेत्रमा हामीले सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । गर्ने यसरी एकएक गरेर नै हो । त्यसकारण महिलासँग सम्बन्धित भएर मलाई प्रश्न गर्दा सुख लाग्छ, जवाफ दिन औधी मन लाग्छ । हामी सक्षम छौं भनेर भन्न र देखाउन पाएका छौं ।
मेगा बैंकको स्थापनादेखि नै र त्योभन्दा अगाडि नबिल बैंकमा हुँदा पनि तपाईं उच्च व्यवस्थापन तहको बलियो हस्तीका रुपमा रहेर काम गर्नुभयो । तर, चर्चामा त्यति किन आउनुभएन ?
मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको माथिल्लो तहले नै हो । यसअघिका दिनमा हाम्रो बैंकको सीईओले यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नुभयो । सबैजना चर्चाको पछि लाग्नुपर्दैन भन्ने लाग्छ । अहिले म मेगा बैंकको सीईओ भएको छु । अब यो जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ ।
मेगा बैंकको संस्थापक अध्यक्ष समाजले नै सम्मान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । संस्थापक सीईओ संस्थाको ब्रान्डिङका लागि एकदमै उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो । यसमध्ये संस्थापक अध्यक्षको निधन भइसकेको छ भने संस्थापक सीईओ पनि अर्काे बैंकमा गइसक्नुभएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ । केही पनि लुक्दैन । कुन बैंकले वा कुन बैंकको कसले के कस्तो काम गरेछ भनेर अंकले नै देखाउँछ । सुरुको ८ वर्षमा मेगा बैंकले जे जस्तो परफरमेन्स गरेको थियो, त्योभन्दा दोब्बर गरेर अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी ठूलो पनि भइसक्यौं, हामीले गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । कर्जा तथा लगानीमा ७० अर्ब रुपैयाँ छ । यो वर्ष नै हामीले १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपेका छौं । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी थपिएको छ । नाफाको वृद्धि पनि राम्रो छ त्यसैले अबका दिनमा मेगा बैंक अझ सबल, सक्षम र प्रभावकारी भएर अगाडि बढ्नेछ ।
हाम्रो यो सफलताको श्रेय हाम्रा ग्राहकलाई दिनै पर्छ, हाम्रो नियमकलाई दिनैपर्छ । र, हामीले अहिले नयाँ ट्यागलाइन लिएका छौं, यहाँहरुको विश्वास जित्दै मेगा बैंक अघि बढ्दै भनेर । ग्राहकले मेगा बैंकलाई जति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ, हामी त्यति नै छिटो अगाडि बढ्छौं ।
सुरुको ८ वर्षभन्दा राम्रो प्रगति एक वर्षको बीचमा नै तपाईंले गरेर देखाउनुभयो, यसको खास कारण के हो ?
मेहेनतको कारणले हो । मेगा बैंकले मेहेनत गर्यो । पहिलाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँगै आएका बैंकभन्दा हामीले सुरुका दिनदेखि नै राम्रो प्रगति गर्दै आएको हौं । हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको मात्रै हो । यो वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर भयो । त्यो मर्जरसँगै जनशक्ति आयो, पुँजी आयो, व्यवसाय आयो र शाखा सञ्जाल आयो । हाम्रो शाखा सञ्जाल नै १०२ भइसक्यो । ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्र छन् । २ हजार बढी रेमिट्यान्स एजेन्ट छन् । कर्मचारी पनि करिब १५ सय पुगेका छौं । माइक्रो बैंकिङमा पनि हामीसँग १५० कर्मचारी छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने माइक्रो बैंकिङमा वाणिज्य बैंकहरुमा यो पृथक् अभ्यास नै होला ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा जानुपर्छ भन्छ । पञ्चवर्षीय योजनामार्फत हामीले यस्तो कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने भनेका छौं । अहिले नै हामीले ६.५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा दिएका छौं । यो सफलतको एक मात्र कारण सोध्नुभयो भने त्यो हामीसँग भएको मानव साधनकै कारणले नै हो । हामीसँग दक्ष र कर्मवीर जनशक्ति छ । त्यो जनशक्तिले हामीलाई यस्तो सफलता दिइरहेको छ । यो वर्ष हामी कर्मचारीको मर्जर कसरी हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । यसमा हामी सफल भएको अनुभूत पनि गरेका छौं । यसैकारण २ प्लस २ ले ४ होइन २२ हुन्छ भन्ने अवधारणामा थियौं, त्यो सफल पनि भयो जस्तो लाग्छ ।
मर्जरपछिको चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापन नै प्रमुख हो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
जनशक्ति व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवन तथा नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि मर्जर पछिको चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापन नै हो भन्ने देखाएको छ । मर्जरपछि जुन जुन कम्पनीमा कर्मचारीको सही व्यवस्थापन भयो, ती कम्पनीले राम्रो प्रगति गरेका छन् । हामीले यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । यसैका लागि विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौं । कर्मचारी व्यवस्थापनबाहेक अन्य समस्या खासै देखिएन ।
बैंकहरुमा कर्जा दिन सक्ने गरी पर्याप्त तरलता छैन । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा नयाँ वा पुराना उद्योगमा लगानी थपिएको छैन । बैंकबाट गएको पैसा कहाँ गयो होला ?
राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकेर यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्नैपर्छ पनि भनेको अवस्था छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । नयाँ र पुराना बैंकहरुले पनि साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जामा विशेष जोड दिइरहेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसको साथै ठूला परियोजना आउनु पर्दैन भनेको होइन । ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भनिएको छ । आर्थिक विकास नभएको होइन । अहिले बैंकसँग कर्जा दिन मिल्ने पैसा नहुनु भनेको राजनीतिक स्थिरतापछि उद्योग व्यवसाय विस्तार र थप गर्ने लहर चलेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको नाफा हेर्ने हो भने औसतमा २० प्रतिशत छ । यसको अर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा वृद्धि भएको छैन भन्ने होइन । कर्जाको माग सबै बैंकमा धेरै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका बैंक शाखाबाट राम्रोसँग निक्षेप आएको छ । तर, त्यस्तो निक्षेपले कर्जाको माग धान्न नसकेको मात्रै हो । सरकारले विकास खर्च प्रक्षेपण अनुसार गर्न सकिरहेको छैन । अब विकास खर्च बढ्छ होला । र, बैंकको निक्षेप पनि बढ्छ होला । त्यसपछि कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ । अबका वर्षमा केन्द्र सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याए र समयमै विकास बजेट खर्च गरे भने अहिले बैंकहरुले भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ ।
विगत वर्षदेखि नै तरलता अभावको समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसमा नीतिगत, प्रणालीगत वा बैंकरको व्यावहारिक समस्याका कारण देख्नुहुन्छ ?
यसमा म प्रणालीगत समस्या देख्दिनँ । देशको रणनीतिक योजनामा अबको ५ वर्ष ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ । २५ वर्षे रणनीतिमा त दोहोरो अंकको वृद्धिको कुरा छ । यसका लागि लगानी आवश्यक छ । लगानी आउने भनेको बैंकिङ क्षेत्रबाट नै हो । अहिले देखिएको तरलताको समस्या भनेको निक्षेप स्रोतको सीमितता हो । यसका लागि विदेशबाट पनि निक्षेप ल्याउन पाइने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । आन्तरिक स्रोतले पुगेन भने काह्य स्रोतका लागि जान पनि बाटो खुला भएको छ । यो विकल्पमा पनि जानैपर्छ । हुन त बैंकहरुले नाफा गरेकै छन् । तर पनि निक्षेप कम हुँदा कहिलेकाहीँ वृद्धिमा ‘ब्रेक’ लागेको अवस्था पनि छ ।
अब हामीले विदेशी लगानी ल्याउने पहल पनि गर्नुपर्छ । सरकारी तहबाट यस्तो पहल पनि भएकै छ । बैंकहरुले विदेशबाट पैसा ल्याउने बाटो खुला भइसकेको छ । तर पनि नेपालको क्रेडिट रेटिङ नै भएको छैन । अब हामी यो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आफ्नो रेटिङ गराउन थालेका छन् । तर, देशको रेटिङ नहुँदा नेपालमा के कस्तो जोखिम छ भनेर विदेशी लगानीकर्ताले हेर्न पाएको अवस्था छैन । यी काम भएपछि समग्र क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ ।
मेगा बैंकमा कर्जाको माग कस्तो छ ?
धेरै छ । जति माग भएको छ, त्यति कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हाम्रो बैंकमा निक्षेप थियो भने हामी तत्काल ६/७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने थियौं । यस्तै, अवस्था अन्य बैंकहरुमा पनि भएको सुनेको छु । हामी जस्तो नयाँ (हामी आफूले आफूलाई सानो बैंक भन्छौं) मा पनि यति छ भने अरु बैंकमा योभन्दा कम छैन होला । यसरी हेर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग होला ।
कहिले अधिक निक्षेप हुने र कहिले कम हुने त नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको चक्र जस्तै भइसक्यो । मेरो ३० वर्षे बैंकिङ करिअरमा कहिले निक्षेप धेरै भएर बचतमा १ प्रतिशत ब्याज दिएको अवस्था पनि थियो, कहिले निक्षेप नभएर माग अनुसारको कर्जा दिन नसकिएको अवस्था पनि छ । आजको दिनमा कर्जा दिन नसकिएको अवस्थामा पनि देखिएको राम्रो पक्ष भनेको उद्यमीको हौसला वृद्धि भएको भन्ने हो । उद्यमशीलताका लागि वातावरण बनेको छ । देशका लागि पनि यो खुसीको कुरा हो ।
विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले खुला गरेको छ, यसका लागि तपाईंहरुले केही पहल गर्नुभएको छ ?
हामीले पहिला पनि चर्चा गर्यौं । विदेशीले नेपालको जोखिम हेर्ने भएको कन्ट्री रेटिङबाट नै हो । बैंकको रेटिङबाट नै हो । हाम्रो देशको रेटिङ नै भएको छैन । फेरि बाहिरबाट पनि सस्तोमा पैसा ल्याउन सक्नुपर्यो । महँगो पैसा ल्याएर नेपाललाई फाइदा हुँदैन । सबै वातावरण मिल्नुपर्छ । फेरि बाहिरबाट पैसा ल्याउन हेजिङ लागत पनि अलि महँगो छ ।
बिग मर्जरको हल्ला सुनिएको छ, मेगा बैंक यस्तो कुनै तयारीमा छ ?
समय आएपछि बिग मर्जर हुन्छ नै । मेगा बैंक खुलेको ९ वर्ष भयो । यो ९ वर्षको बीचमा नै हामी चुक्ता पुँजीको हिसाबले दोस्रो ठूलो बैंक बन्छौं भन्ने कुरा पनि प्रश्न जस्तै हुन्थ्यो होला । तर, भयौं । त्यो हेर्दा नेपाली बजारमा बिग मर्जर आवश्यक छ भने अवश्य नै आउँछ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंलाई व्यक्तिगत रुपमा बिग मर्जर आवश्यक हो जस्तो लाग्छ ?
व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने त ठूलो बैंक हाक्न नै सजिलो हुन्छ । पहिला स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा काम गरें । त्यहाँ ठूलो फन्ड थियो । सरकारी बन्डहरुमा धेरै पैसा हाल्थ्यौं । त्यसपछि नबिलमा आएँ । त्यहाँ पनि ट्रेजरी म्यानेजमेन्टमै काम गरें । नबिलमा पनि ठूलो फन्ड नै थियो । त्यसैले ठूलोमा काम गर्दा नै रमाइलो हुन्छ ।
जति ठूलो त्यति जोखिम (टु बिग टु रिस्क) पनि भनिन्छ नि ?
जति ठूलो त्यति रमाइलो (टु बिग टु फन) पनि भनिन्छ नि । त्यसैले यसका दुवै पाटा छन् । राज्यको आवश्यकता ठूला बैंकको नै हो भने हामीले नकार्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि १४/१५ वटा बैंक भए हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो अवधारणमा हामी सबै सहमत हो भने बिग मर्जरको लागि केही समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने तपाईंको पनि मान्यता हो ?
हो । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंक जरुरी नै छैन । यो संख्या धेरै हो । हामी सबै बंैकरले यसको महसुस गरेका पनि छौं । हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छौं भन्ने कुरा आएको छ । ‘कटथ्रोट कम्पिटिसन’ गरिरहेका छौं भनिन्छ । वास्तविकता यही नै हो र संख्या सानो नै बनाएर जाने हो भने १४÷१५ वटा बैंक बनाऔं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं । बलियो पुँजी आधार भएका बैंक बनाऔं । त्यस्तो भयो भने ठूला परियोजनालाई चाहिने स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि सक्छौं । यस्तो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
संख्या धेरै भयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा दिन्छ भनिन्छ तर २८ वटा वाणिज्य बैंक हुँदा पनि निक्षेप वा कर्जाको ब्याजदर करिब उस्तै छ । सबै बैंकका प्रोडक्ट करिब उस्तै छन् । संख्या सानो भयो भने बैंकहरुको कार्टेलिङ अझ बढ्दैन र ?
बैंकहरुमा जानुभयो भने सबै बैंकमा सबै प्रोडक्ट भेटिन्छ । बैंकमा डिजिटलाइजेसनको कुरा आएको छ । सबै बैंकमा ब्रान्चलेस बैंकिङ सुविधा छ । इन्टरनेट बैंकिङ छ । मोबाइल बैंकिङ छ । क्यूआर पेमेन्ट जस्ता सबै सुविधा सबै बैंकमा छन् । कार्डका सबै प्रोडक्ट छन् । ब्याजको कुरा गर्ने हो भने नयाँ पुरानो बैंक भन्ने नै छैन । ठूलो वा सानो बैंक भन्ने नै छैन । सबै बैंकको ब्याज करिब उस्तै छ । अब हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो सेवाको गुणस्तरमा हो । जो ग्राहक बैंकमा आउँछन्, ती खुसी र सन्तुष्ट भएर बैंकबाट बाहिरिन पाउनुपर्छ । खुसी कर्मचारीले मात्रै ग्राहकलाई खुसी बनाएर पठाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेगा बैंकको कुरा गर्ने हो भने उपत्यकाभित्रका हाम्रा सबै शाखामा कस्टुमर केयर अफिसर राख्ने गरेका छौं । यस्ता अफिसरले बैंकमा आउने ग्राहकलाई के सुविधा चाहिएको छ, त्यसमा सहजीकरण गर्ने हो । यस्तो व्यवस्था नेपालभर विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हाम्रो मान्यता नै ग्राहकले बैंकमा पस्न सहज महसुस गरोस् र खुसी तथा सन्तुष्ट भएर बाहिर निस्कियोस् भन्ने नै हो ।
यो वर्ष मेगा बैंकको अवस्था कस्तो होला ?
हामी प्रगतिको बाटोमा निरन्तर लागिरहेका छौं । बैंकले सेयरधनीलाई वाञ्छित प्रतिफल दिन सक्नु पर्यो । त्यो दिन्छौं । यो बैंकका कर्मचारीलाई मेगा बैंकमा नै वृत्ति विकासको सम्भावना छ भनेर अर्काे बैंकमा नजाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यो गर्छौं । पुँजी धेरै भएकाले व्यवसाय वृद्धिको सम्भावना पनि धेरै छ । त्यो काम पनि गर्छाैं । अरू बैंकभन्दा छिटो प्रगति गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि गर्छाैं । यसैका लागि हाम्रा सबै संयन्त्र परिचालित हुन्छन् । सम्पूर्ण मेगा टिमले बैंकलाई अझ राम्रो बनाउँछन् । अहिले हामीसँग १०२ शाखा छन् । थप १० शाखा विस्तारको तयारीमा छौं । मर्जर र एक्विजिसनमा गएनौं भने थप शाखा विस्तारमा जान्छौं । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्ना कर्मचारी आफ्नै बैंकमा अड्याएर राख्नु नै हो । बैंकका शाखा विस्तार भइरहेका छन् । कर्मचारीले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा जाँदा थप सेवा सुविधा पाइरहेको हुन्छ त्यसैले यो काम गलत हो भन्ने पनि होइन । तर, बैंकका तर्फबाट हेर्ने हो भने यसले चुनौती थपेको छ ।
मर्जर एक्विजिसनको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ?
बिग मर्जरको कुराहरु आइरहेको छ । सबै जना यतातिर अगाडि बढ्नुभयो भने हामीलाई पनि त्यसमा सोच्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसको विकल्प खुला छ । वार्षिक साधारणसभाले पनि मर्जर र एक्विजिसनको अधिकार दिइसकेको छ ।
तपाईंको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ, यसबीच मेगा बैंक कस्तो बन्छ होला ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्छ भन्ने कुरा होइन । बिग मर्जर भएर नयाँ सिनर्जी थपियो भने बेग्लै कुरा हो । होइन भने हामी यो तीन वर्षको बीचमा अहिलेका मध्यमस्तरका बैंकको श्रेणीमा पुगिसक्छौं । हामीले बनाएको ५ वर्षे रणनीति अनुसार निक्षेप र कर्जाको आकार अहिलेभन्दा दोब्बर हुन्छ । नाफा दोब्बर हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६, २०:४३:००